Kismaayo:-Waxaa shalay loo doortay Madaxweyne ku xigeenka Jubballand Gen. C/laahi Shiikh. Ismaiil Fartaag isagoo isla shalay la dhaariyey, madaxweyne ku xigeenka Gen Fartaag ayaa markii la doortay waxaa uu la hadlay saxaafada waxaan uu sheegay in doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee madaxweyne loogu doortay Maamul Gobolleedka Jubba Land Axmed Maxed islaan in ay u dhacday si xalaal ah.
Madaxweyne ku xigeenka Jubballand Gen. C/laahi Sh. Ismaiil Fartaag oo wax laga wiidiiyey in ay jirtay musuqmaasuq iyo in doorashada lagu shubtay ayaa waxaa uu ku tilmaamay been abuur isagoo sheegay in musharaxiinta u taagnaa xilka Madax weynanimada Jubbaland ay joogeen goobta ayna marii danbe ay u tanasuleen Madaxweynaha xilka loo doortay ee Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, iyagoo eegaya xaalada amni ee ka jirta Gobollada Jubooyinka iyo Gedo.
Madaxweyne ku xigeenka Jubballand Gen. C/laahi Sh. Ismaiil Fartaag oo wax laga wiidiiyey Madaxweynayaasha kale ee looga dhawaaqay magaalada Kismaayo ayaa waxaa uu sheegay in shirka ka socday Kismaayo uu socday mudo badan oo gaaraysa ilaa 5 sanno cid walbana ay ogtahay qaabka iyo goobta ay ergooyinku ku sugnaayeen saxaafaduna ay inta uu socday shirku ay tabinayeen.
Ugu danbayntii ayaa Madaxweyne ku xigeenka Jubballand Gen. Fartaag waxaa uu soo dhoweeyay xilka loo doortay ee isagoo baaq u diray shacabka Jubooyinka uguna baaqay isku duubni iyo in ay taageeraan maamulka cusub kana shaqeeyaan nabad gelyada.